Suusii mobaayili fi jireenya nama yeroo amma – Akkam Jirtuu? Nooraa!
Suusii mobaayili fi jireenya nama yeroo amma
Suusiin mobaayilii dhuguma hammatadha
Qorannoo geggefameen warrii durbaa mobayilii isaanii irratti sa’aati 10 ol dabarsu, kuunis inteerneeti fayyadamuu ni dabalata, yoo xiqaatees ergaa(message) 100 ol ni erguu kan jedhuudha. Fayyadamtoota bilbila ismaartifoonii ameerikaa nama sadii kessaa osoo mobayila isaani hin xuqin daqiqaa 60 turu hin dandaahan kan jedhuudha. Kan biyya keenyaammoo maal tahuu dandaaha laata? (Nomophobia) jechuun soda mobaayila malee turu dadhabuu jedhama kanafis namota kanan midhamaniif bakka isaanitti gorfamaniif tasgefaman(rehab-center) banama jira.
Qorannoo bara 2011
Mata duree “World unplugged” jedhuun qorannoo jalqabameedha kanaanis yuniiversitii biyya addaa addaa 10 irratti kan godhameedha kunis baratoota 1000 hirmaachisee ture. Qorannoon kunis sa’aati 24 kessatti baratonnii (Mobaayila,Laptoopi,soshal midiyaa kamiyyuu) osoo hin fayyadamiin akka isaan turan kan dirqamsisuu ture. Sagantaa kana irrattiis baratonni baayyeen dhiphina sammuu,jeeqamu,boqonnaa dhabuu,qobaa taahuu kessa seenanii turan.
Dhibee dugdaafii mormaa
Dhabbatti Biritiish sikopiraktiik assooseeshiin jedhamu akka gabaaseetti galannii mobaayilii hin badin malee namni dhibee dugdaa wal qabate dhufu nuu bayyateera jedhu. Qorannoo bara 2015 dargagoota umurii 16-24 argaman dhibee ispayinaal diskiif saaxilama jiru jeedha, kunis 40% yommuu tahu amma gara 60% ni guddata jedhamee yaadama. Qorannoon kan biraa immoo gadi jedhanii ergaa barreessuun ykn (text) gochuun hanga paawundi 50 ulfaatina tahuu dugda keenya irrati dabala kuunis mucaa waggaa 7 waliin wal qixa.
Soshal midiyaa irratti yommuu yeroo dabarsiinu yaada nuti maxxansinu,suuraan,vidiyoonifi kan biroon kan namotaan hin jaalatamne yoo taahan(Like,Comment,Share) kan hin godhamnee yoo tahee dhipachuufi maalif jedhani gara of-gaafachutti nama ceesisa. Yeroo gaarii maati,hiriyoota wajjiinifi namoota jaallatan dukaa miira ho’aan dabarsuu irra suuraa kahuu feesbuukii irratti maxxanfamuu bareedaa kahuuf of dhipisuu,namoota kallattiin hirmaattuu gammachuu keenyaa hin taaneef toora soshaal midiyaa irratti agarsisuuf dhipachuun isa tokko. Toora soshaal midiyaa,marsaritti irratti oduun siyaasaa,jibba,ajechaaf kanafi kana fakkaatan maxxanfaman dhipina kessa nama seensisuun hojii idilee irratti dhibbaa hanga kana hin jedhamnee qaqabsiisu. Maxxansa kanaafis deebii keennuuf arrabsoo,ilaalcha ofii barreessuun walitti bu’insa hin barbaachisnee kessa akka seennuu nu godha jechuudha.Kunis walitti bu’insa nama dhunfaa,walitti bu’insa garee fi hanga sadarkaa biyyaatti waan baayyee dhibbaa hamaa kan fiduu dandahuudha.
Irriba madalamaa hin taane
Qorannoo geggefameen 63% umurii 18-29 gidduutti argaman mobaayila,tabileeti isaanii osoo tutuqanii achumaan rafu, of bira bulchuus.Ifti halkan ismaart fooniifii,tabileeti keessaa bahuu ispirisii lamaa wajjiin wal qixxeedha,kanaafis irriba isinirraa ari’uuf baayyee salphaadha.
Dhibbaa hawasumma irrattii qabu
Yommuu bilbilootafi tabileeti keenya irratti yeroo dabarsinu qoba teenya(Isolation) jedhamuun beekama,kunis namoota wajjiin hariroo gaari akka nuti hin qabanee goodha, Barsifata kanan dura ture akka dhiisnu nu godha, nama wajjin wal bellamanii waliin dubachuu irra bilbilaan,chaatiin,sms haasahuu filachuu. Gammachuu (artificial happiness) gamachuu soba taheef dhugomu hin dandeenyeen of gamachisuu(Chaati qofaa irratti jaalallee baafachuu fi kan biro biro)
Dhibbaa hawasumma irrattii qabu itti fufee
Yaada ofii ibsachuu dadhabuu , ija jabina dhabuu, mobaayila ofii caalatti fira godhachuufi namaan marihachuu irra toora marsaritii irraa odeffannoo soquu.
Dhibee gurraa, (headphone) fayyadamaa turuun akka deemsa keessa akka gurri keenya dandeetti dhageetti isaa midhamu goodha.Dhibee ijaa , Iji keenya sababa ifa biluu layiit iskiriin keessaa bahuun akka of dadhabu godha. Radiation) caralla elektro magineet fildii bilbiloota keessaa bahuun sammuu midhuu dandahu.